ဂျက်ကီချမ်း သရုပ်ဆောင်တဲ့ Chinese Zodiac ရုပ်ရှင်စက်ကားကြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရုံတင်ပြသပြီ ~ မွိုးပိုခိုမောင်;
5:33 PM မူလစာမျက်နှာ, သတင်း No comments
ဆဲန်ထာရာ ကရဲန် ဆဲန်ထရယ်ဝေါလ်မှာ ဂျက်ကီးချမ်းနှင့်အတူ မင်းသမီးသရုပ်ဆောင်တို့ကထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်ကြီး၏ မွေးနေ့ ဆုမွန်ကောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့စဉ်
အနာဂတ်မျက်လုံးရှင် (အောင်ခန်.) ကာလီဒေ၀ီ (အောင်ခန်.) လက်သုံးတော်ဓါး (အောင်ခန်.) နေဘုရားတော် (အောင်ခန်.) အမွေ အောင်သင်း ...
ယုံကြည်စွာ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါက အကျိုးထူးများ ရစေသော အစွမ်းထက်ဂါထာတော်များ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့  နေ့စဉ်ဘုရားရှိခိုးအပြီးမှာ ရွတ်ဖတ်ပူဇော်လေ့ရှိကြတဲ့ အစွမ်းထက်ဂါထာတော်များ ရှိပါတယ်.. ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ နေ့စဉ်မပြတ...
ဗွေ;ဗွန်သီ;သဲင်;ဟော်, ပိုမွိုက်တွမ်းပိုလိမ္မား(၁) ပိုမွိုက်တွမ်းပိုလိမ္မား(၂) ပိုမွိုက်တွမ်းပိုလိမ္မား(၃) ပိုမွိုက်တွမ...
နောင်တောင်း လှုပ်ရှားမှု မှတ်တမ်း ၁
ကျွန်မတို့ နောင်တောင်းမှာ အခုဆိုရင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ၊သားများကို အခမဲ့ ကွန်ပျုတာ သင်တန်း ဒုတိယအကြိမ်ကို ၂.၉.၂၀၁၁ ရက်နေ့မှာ ဖွင့်လှစ်လ...
ရှမ်း(သျှမ်း)=မြန်မာစကားပြောမယ်(အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ)  ဤ ပို့လေးသည် သျှာမ်း နှင့် မြန်မာ နှစ်ဘာသာတွဲပြီး လေ့လာလွယ်အောင် ရေးသားထားပါသည...
AFFM သည် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုက်ရိုက် ဆက်ဆံမည်
မြန်မာနိုင်ငံ တောင်သူ လယ်သမားနှင့် စိုက်ပျိုးရေး အလုပ်အမားများ အဖွဲ့ချုပ် (AFFM)သည် အခြားသော မိတ်ဖက် သမဂ္ဂ များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး အရေးပေါ်အ...
Part I: The Dalai Lama, The Monasteries and the People . Filmed in the Dalai Lama’s residence in Dharamsala, North India, and in ...
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဆိုသည်မှာ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမများပေါ်တွင်တည်သူ တနည်းအားဖြင့် မြတ်ဗ...
မနူဟာမင်း လက်ထက် ကတည်းက သုဝဏ္ဏဘူမိ ဆံတော်ရှင် ကို ကျိုက်ထီးဆောင်းဆရာတော် ဦးဆောင်၍ ဒေါက်တာခင်ရွှေ မိသားစု ဒါယကာပြုကာ ဖွင့်ဖော်ခြင်း
မွန်ပြည်နယ် သာသနာနုဂ္ဂဟ အသင်းကြီး၏ လှုပ်ရှားမှုမှာလည်း အစဉ်အလာ ကောင်းခဲ့သည့် အတိုင်း ဆက်လက် ကောင်းဆဲ ဖြစ်သည်။ တောစဉ် တောင...
စိတ်ကို ဥာဏ်ပညာက အုပ်ချုပ်၏
let study english
history of paoh (1)
ခွန်အောင်မိုးမှလာလည်သူမိတ်ဆွေအပေါင်းအားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း. Powered by Blogger.
ခွန်အောင်မိုး,တောင်ကြီးမြို့နယ် ၆မဲုင် ထီအုံတောင်ရွိုကျေးရွာ,နောင်တောင်းပရဟိတကျောင်း ဟိုပုံးမြို့နယ်, ထုံ့ကောင်းမှူး.မဲဟောင်ဆွဉ်, Thailand
ကယန်းအကြောင်း တစေ့တစောင်း ===================
ဒါကတော့ ဓါတ်ပုံတွေကနေ flash အဖြစ် ပြောင်းပေးတဲ့ co...
ဂျက်ကီချမ်း သရုပ်ဆောင်တဲ့ Chinese Zodiac ရုပ်ရှင်စ...
(၆၃)နှစ်မြောက် ပဒေသရာဇ်စနစ် ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရေးနေ့...
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကျွန်တော် အိမ်မပြန်ဖြစ်...
KIO,ဌာနချုပ် အနီးလဂျားယာန် တွင် လေကြောင်းမှ ======...
ရဟတ်ယာဉ်များသုံး တိုက်ခိုက် =================
ရှမ်းပြည် လူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးအဖွ...
ဒီဇင်ဘာလ (၁၁)ရက်၊ ပဒေသရာဇ်စနစ် တော်လှန်ရေးနေ့ =...
ပအိုဝ်းအမျိုးသားတို့၏ “December Eleven” ပဒေသရာဇ်စန...
အောင်ပန်းမြို့တွင် ထော်လာဂျီနှင့်(၂၂)ဘီးယာဉ် တိုက်...
ဒီဇင်ဘာရောက်မှာ ကြောက်နေသူများ၏ ရင်ဖွင့်စကား
မြေသိမ်းခံရသူ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများကို ပြည်နယ်ဝ...
ရှမ်း မြောက်ပိုင်း ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်န...
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဟိုပုံးမြို့ တ...
ပအိုဝ်းအမျိုးသား ဂန္ဓ၀င် ဂီတအနုပညာရှင် ခွန်သာဒွန်း ...
တောင်ကြီးမြို့နယ် ၆ မိုင် ပင်ငိုစံပြကျေးရွာ ပအိုဝ...
ပအိုဝ်းပါတီရဲ့ မြေသိမ်းမှုဆိုင်ရာပြောဆိုချက်ကို တော...
Copyright © မွိုးပိုခိုမောင်; | Powered by Blogger